သတင်း Archives - Page 52 of 54 - Tips News
အိမ်မွေးခွေးနဲ့ကြောင်မှတ်ပုံတင် အလျင်အမြန်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့ မြို့တော်ဝန်ကြီး စီစဉ်နေ
အိမ်မွေးခွေးနှင့်ကြောင်မှတ်ပုံတင် အလျင်အမြန်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောကြားလိုက်သည်။ “လက်ရှိမှာ အိမ်မွေးခွေးကြောင်တွေ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရာမှာ လွယ်ကူစွာလျှောက်ထားနိုင်ရေးနဲ့ စနစ်တကျ စိစစ်ခွင့်ပြုနိုင်ရေးတို့အတွက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးမြူခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာပုံစံကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီရဲ့ Website (www. ycdc. gov.mm)မှာ Download ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ရုံးတွေ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး နဲ့ဈေးများလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနဲ့ဘသားသတ်ရုံများဌာနလက်အောက်ရှိ ကုသရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ခရိုင်ရုံး)တွေမှာလည်းမှာလည်း အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ပြီး ကုသရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ခရိုင်ရုံး)တွေမှာ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ဖို့နဲ့ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရင် သတ်မှတ်အခွန်အခပေးသွင်းစေပြီး အိမ်မွေးခွေး၊ကြောင်မှတ်ပုံတင်ကို အလျင်အမြန်ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်”ဟု၎င်းကပြောသည်။ ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေတွင် ပုဒ်မ(၃၂၁)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရမည်သူမျှ မြို့တော်နယ်နိမိတ်အတွင်း ကော်မတီကထုတ်ပေးသည့် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် မွေးမြူခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ သယ်ဆောင်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းမပြုရ။ ပုဒ်မ (၃၂၁)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)ပါ တားမြစ်ချက်ကိုလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း...
ဈေးကွက်ထဲ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကြက်သားစိမ်းတချို့မှာ ဆေးယဉ်ပါးနေသော ဆယ်မိုနဲလားဗက်တီးရီးယားပိုး (Saimonella) တွေ့ရှိနေတဲ့အပေါ် ပြည်သူများအနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲ သေချာစွာ ချက်ပြုတ်စားသုံးသင့်‌ကြောင်း ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ၊ ညွန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ဝင်းမော်ထွန်းက ပြောသည်။ မကြာသေးခင် ရက်ပိုင်းက ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနတွင် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးသုတေသန ညီလာခံမှာ တင်သွင်းခဲ့သော စာတမ်းတစ်စောင်အားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် နှင့် သင်္ယန်းကျွန်းမြို့နယ် ဈေးများရှိ ကြက်သားစိမ်းအချို့မှာ ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးနေသည့် ဆယ်မိုနဲလားပိုး အများဆုံး တွေ့ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ အခုတွေ့ရှိနေရသော ဆယ်မိုနဲလားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့် အဆိုပါ ဗက်တီးရီးယားပိုးပါဝင်သော ကြက်သားများကို ကျက်အောင်ချက်ပြုတ်ရင် ပိုးသေနိုင်ကြောင်း ၊ အသားစိမ်း ကိုင်ထားသောလက်ကိုလည်း သေချာစွာဆေးကြောသန့်စင်ရန် လိုအပ်သလို အသားစိမ်းများနှင့် ချက်ပြုတ်ပြီးသား အစားအစာများ အတူမထားသင့်ကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ ဝင်းမော်ထွန်းက...
ဖယ်ခုံမြို့တွင် ကြွက်များကိုနှိမ်နင်းရန် အစိုးရအဖွဲ့က မြွေများ လာလွှတ်ရာ ဒေသခံများကြောက်လန့်နေ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံမြို့နယ် ကယန်းဒေသရှိကျေးရွာ တောင်ယာခင်းများတွင် ကြွက်များပေါများသဖြင့် ကယန်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးမှ လွှတ်ခိုင်းသဖြင့်ဟုဆိုကာ တောင်ယာခင်းများအတွင်းသို့ မြွေများ လာရောက်လွတ်ရာ ကျေးရွာသားများမှ ကြောက်လန့်၍ ကန့်ကွက်မောင်းထုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ” မြွေက ဘယ်လိုလည်း သူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးဘယ်လိုလည်း ကောင်းကျိုးဘယ်လိုလည်း ဂဃနဏမသိတဲ့ခါကျတော့ ရွာသားတွေက စိုးရိမ်စိတ်က ရှိလာတာပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတဆင့်က ကျွန်တော်တို့ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်း ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘူး။ ရွာသူရွာသားနဲ့လည်းလာပြီး ဆွေးနွေးတာရော တိုင်ပင်တာမရှိတဲ့ခါကျတော့ ဒီတိုင်းလာချတဲ့အခါကျတော့ ရွာသားက ကြောက်နဲ့စိတ်ရယ်။ ဘာဖြစ်လည်း ငါတို့ကို ကြံစည်တာလား ဘာဖြစ်မလည်း အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာတာပေါ့နော်” ဟု မောင်တိုးရွာဟောင်းနေ ရပ်မိရပ်ဖ ခွန်းသားငယ်က ပြောကြားသည်။ ကြွက်များသောင်းကျန်းသဖြင့် တောင်ယာများပျက်စီးခဲ့ရသည့် ရွာတစ်ရွာလျှင် မြွေအကောင် ၂၀၀ ခန့်အား လာလွှတ်နေပြီး မြွေများမှာ နိုင်ငံခြားမှ မှာယူပြီးလွှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”မနေ့က ဝန်ကြီးနဲ့စကားပြောတယ်။ ငါကလုပ်ချင်လို့ လုပ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ အထက်လူကြီးတွေက ငါ့ကိုခိုင်းလို့...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲက တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ဦးတေဇကိုတော့ ပရိသတ်ကြီး သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ၁၉.၁.၂၀၂၀ တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့ ပြင်ဦးလွင်၊ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာ ခမ်းနားသိုက်မြိုက်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးတစ်ခုကို ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီမင်္ဂလာပွဲကြီးကတော့ ဦးတေဇရဲ့သား ပြည့်ဖြိုးတေဇနဲ့ မသက်နှင်းလှိုင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာတော့ သူတို့ မင်္ဂလာပွဲရဲ့ အပြင်အဆင်တွေက လူပြောများလောက်အောင် ရေပန်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီမင်္ဂလာပွဲကြီးကို ထိုင်းကပညာရှင်တွေလာရောက်ပြီး ပန်းအပြင်အဆင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်းပြင်ဆင်မှုအတွက် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ ခန့် ကုန်ကျခံပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေးသားနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပြည့်ဖြိုးတေဇနဲ့ မသက်နှင်းလှိုင်တို့ဟာ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာပဲ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပန်းမြို့တော်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ရလောက်တဲ့ ပြင်ဦးလွင်က ကန်တော်ကြီးပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာ မနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ ခမ်းနားလွန်းလှတဲ့ ပြည့်ဖြိုးတေဇနဲ့ မသက်နှင်းလှိုင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပန်းအလှဆင်ပုံရိပ်တွေဟာ လူငယ်တွေကြားမှာ အားကျစရာကောင်းလောက်အောင် ရေပန်းစားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထိမ်းမြားလက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဟာ...
ရန်ကုန်-ကျောက်ဖြူ ခရီးသည်တင် မျိုးဆက်သစ် ဘတ်စ်ကား ချောက်ထဲထိုးကျ (၄)ဦးသေဆုံး
ရန်ကုန်-ကျောက်ဖြူ ခရီးသည်တင် မျိုးဆက်သစ် ဘတ်စ်ကား ချောက်ထဲထိုးကျ (၄)ဦးသေဆုံးပြီး အများအပြားဒဏ်ရာရ… ဇန်န၀ါရီ ၂၀ – ရန်ကုန်မြို့မှ ကျောက်ဖြူသို့ မောင်းနှင်လာသည့် ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကား တစ်စီး ယနေ့နံနက်က ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကုလားပုန်း မြိုချိန် ကျေးရွာအနီး ချောက်ထဲကို ထိုးကျသွားသဖြင့် အနည်းဆုံး ခရီးသည် ၄ ဦးသေဆုံးပြီး အများအပြား ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ကုလားပုန်းမြိုချိန်ကျေးရွာမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ” အခု အလောင်း သုံးလောင်းကို ဆွဲတင်ထားပြီ။ ယောင်္ကျားလေး ၂ ယောက်နဲ့ ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ပါ။ ယောက်ျားက ကားစပယ်ယာလို့ သိရပါတယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတာ မသိရသေးဘူး။ ကားအောက်မှာလည်း မိန်းမကြီး တစ်ယောက် ပိပြီး သေနေတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘယ်နှစ်ယောက်သေတယ်ဆိုတာကို ကားကိုဆွဲတင်ပြီးမှ သိရမှာပါ” ဟု ပြောကြားသည်။ ခရီးသည်တင်ကားမှာ မျိုးဆက်သစ်...